ခင်မောင်စော (ဘာလင်) – “ရိုဟင်ဂျာ”၏ဇာစ်မြစ် – MoeMaKa Burmese News & Media
(မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၇
(ဤစာတမ်းမှာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ လွန်ခဲ့ သော ၂၄ နှစ်ခန့် ကပင်ရေးသားထားခဲ့ သော စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်ကပင် စာရေးသူသည် ၎င်းရိုဟင်ဂျာဆိုသူများ၏ အကြံမှာ မြန်မာပြည်၏တစိတ်တဒေသ သို့ မဟုတ် ဖြစ်နိုင်ပါက တပြည်လုံးကို သိမ်းပြီး အစ္စလာမ်မစ်နိင်ငံထူထောင်နေချင်ကြကြောင်း အသိပေးထားပြီး၊ ၎င်းအန္တရာယ် ကို အချိန်မီ ကြိုတင်ကာကွယ်ထားကြရန် ကြိုတင်သတိပေးထားခဲ့ ပါသည်။ ဝါရင့် နိင်ငံရေးသမားကြီး ဘုံပေါက်သာကျော်ကလည်း “ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံနှင့် ရိုဟင်ဂျာအန္တရာယ်” ဆိုသောအမည်ဖြင့် စာအုပ်တအုပ်ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်က ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ ပြီး နဝတ၊ အင် အယ်လ် ဒီ နှင့် တစည အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးသို့ ၎င်းစာအုပ်ကို ပေးပို့ ပြီး၊ ၎င်းရိုဟင်ဂျာဆိုသူများ၏ အန္တရာယ်မသေးကြောင်း သတိပေးထားခဲ့ ပါသည်။ သို့ သော် ရခိုင်များမှအပ မည် သည့် နိုင်ငံရေးပါတီကမှ မည်မည်ရရ အလေးပေးလုပ်ဆောင်ခြင်း မရှိခဲ့ ကြပါ။ တချိန်တည်း၌ အသားထဲက လောက်ထွက်ဆိုသကဲ့သို့ မြန်မာစစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်သူအ ချို့သည် “ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ။ ငါ့ရန်သူ၏ ရန်သူသည် ငါ့မိတ်ဆွေ” ဆိုသောထုံးကို နှလုံးမူပြီး ၎င်းရိုဟင်ဂျာဆိုသူ များ၏ ဘက်က ၀ါဒ၀င်ဖြန့်ပေးကြသည်။ တချို့ အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းအချို့သည် အာရပ်နိုင်ငံတွေက ပေးသောပိုက်ဆံကိုယူပြီး ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများအတွက် သမိုင်းလိမ်ပြီး ၀ါဒဖြန့် စာစောင်များကို မြန်မာဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ဖြင့်ရေးသားပေးကြ၏။ ယခု ၂၄နှစ်ကြာသွားပြီးသောအချိန်တွင် မူ ၎င်းရိုဟင်ဂျာဆိုသူများ၏ အန္တရာ ယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မည်မျ ကြီးမားနေကြောင်းကို လူတိုင်းမြင်တွေ့ လာကြရပေပြီ။ ထို့ ကြောင့် လွန်ခဲ့သည့် ၂၄နှစ်၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ်က စာရေးသူ ရေးသားထားခဲ့ သော ဤစာတမ်းကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်မွမ်းမံပြီးတင်ပြ ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း)
ယခုအချိန်များတွင် ရိုဟင်ဂျာဆိုသောနံမည်ကို ကြိမ်ဖန်များစွာကြားနေရပါသည်။ “နိုင်ငံခြားသားများ”၊ “သတင်းစာဆရာ”ဆိုသူများက ၎င်းတို့ အကြောင်းကို အသားပေးရေးသားနေကြပါသည်။ ထိုသူများ၏ရေးသားချက်များတွင် ရခိုင်လူမျိုး၊ ရခိုင်ပြည်၊ နှင့် ရခိုင်သမ်ိုင်းအကြောင်း များကို လုံးဝ ချန်လှပ်ထားပြီး၊ မြန်မာသမိုင်းတွင်ရော နိုင်ငံတကာသမိုင်းတွင်ပါ တခါမျှ မကြားဘူး၊ မတွေ့ဘူး၊မပါ ဘူးသော “ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုသူများက ရခိုင်ပြည်မြောက်ဦးမင်းဆက်ကို တည်ထောင်ခဲ့ ပါသည်။ မြောက်ဦးမင်းဆက်မှ ဘုရင်များသည် မူဆလင်ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပြီး မြန်မာဘုရင်ဘိုးတော်ဘုရားက ၁၇၈၄ ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ပြည်ကို သိမ်းယူသောအခါ မူဆလင်ဘာသာဝင် “ရိုဟင်ဂျာ”တို့ ကို မောင်းထုတ်လိုက်ပြီး၊ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် မာဂ (ဝါ) မဂ် (Magh/Mogg) လူမျိုးများ (ပါဠိ/မာဂဓ ဘာသာစကားပြောသူများ) ကို ရခိုင်ပြည်တွင်နေထိုင် စေသည်။ ယခုလက်ရှိရခိုင်ဆိုသူများမှာ ၎င်းမာဂ (ဝါ) မဂ် (Magh/Mogg) လူမျိုးများနှင့်ဘိုးတော်ဘုရား၏ ဗမာစစ်သားများမှ ဆင်းသက်ပေါက်ဖွားလာသော မျိုးမစစ်ကပြားများဖြစ်သည်။ ယခုမြန်မာပြည်၏ စစ်အစိုးရသည်လည်း ဘိုးတော်ဘုရား လုပ်သည့် ပုံစံအတိုင်း ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်များကို မောင်း ထုတ်နေပြန်ပြီ။ ထိုေ့ကြာင့် ရခိုင်ပြည်၏ မူလတိုင်းရင်းသားအစစ်ဖြစ်သော “ရိုဟင်ဂျာ”များ၏ဘဝမှာ ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများ၏ ကံကြမ္မာကဲ့ သို့ သနားစရာဖြစ်နေရ ပါသည် စသဖြင့် သမိုင်းလိမ်များကို လက်ရဲ ဇက်ရဲ ရေးသားလာကြပါသည်။
ထိုသတင်းစာ ဆရာများ၏ အာဘော်သက်သက်ကိုသာ ဖတ်ရှုရပြီး “သူခိုးက လူ လူ ဟစ်နေ”သည့် ဇာတ်လမ်းနှင့် သမိုင်းကြောင်းအမှန်ကို မသိသော ကမ္ဘာ စာဖတ်ပရိသတ် အချို့ မှာ ၎င်း “ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုသူများ၏ထောင်ချော က် မိကုန်ကြပါတော့သည်။ မြန်မာပြည်ကို ပွဲလန့် တုန်း ဖျာဝင်ခင်းချင်သည့် ၎င်းရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူများ၏ ယုတ်မာသောအကြံအစည် နှင့် လုပ်ဇာတ်များကို သိသူအလွန်နည်းပါးကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ ရပါသည်။ ၎င်းဝါဒဖြန့်ချက်များသည်မျက်ကန်းမျိုးချစ် များသော မူဆလင်ကမ္ဘာတွင် အတော်လေးထိရောက်မှုရှိပြီး ဆော်ဒီအာရေဗျ မင်းသားတပါးကဆိုလျှင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ကာ မြန်မာပြည်ကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရန် အဆိုပြုခဲ့ကြောင်း Bertil Lintner က အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
“Prince Khaled Sultan Abdul Aziz, commander of the Saudi contingent in the 1991 Gulf War, visited Dhaka, Bangladesh, in Mid-April 1992 and recommendedaDesert Storm-like action against Burma; “just what [the UN] did to liberate Kuwait”. (Bertil Lintner, Chronology of The Events, in du, Sonderbeilage, Heft 11, 1993)
“သူခိုးက လူ လူ ဟစ်နေ”သည့် ဇာတ်လမ်းနှင့် သမိုင်းကြောင်းအမှန်၊ ဇာတ်ကြောင်းမှန်ကို သိသူ အနည်းငယ်နှင့် သမိုင်းသုတေသီတို့ က ဖြစ်ရပ်အမှန်ကို ရှင်းပြချင်သော်လည်း၊ “ကျား ကျား မီးယပ်” အလုပ်ခံရပါသည်။ ထိုကြောင့် စာရေးသူသည် ၁၉၉၃ ခုနှစ်မေလအတွင်းက ဘာလင်မြို့ Humboldt တက္ကသိုလ် ကဦးစီးကျင်းပခဲ့ သောမြန်မာရေး ရာစာတမ်းတင်ပွဲတွင်၊ (“On the Evolution of ‘Rohingya’ Problems in the Rakhine State) “ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသောအမည်ပေါ်ပေါက်လာပုံ” အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော စာတမ်းကို တင်ခဲ့ ပါသည်။ သုတေသီများကြားတွင် အောင်မြင်မှု ရသော်လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရကို မကြိုက်ဘဲ မျက်မှန်အနက်တပ်၍ကြည့် နေသောသူများ၏မျက်စိတွင်မူ အကောင်းမြင်မည် မဟုတ်ပါ။
၎င်းစာတမ်းပါ သုတေသနပြုထားသောအချက်အလက်အချို့ ကို ယခုမြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားတင်ပြ ပါမည်။
“ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုသောအမည်ကို ၁၉၅၀ခုနှစ်များ မတိုင်မှီက မည်သူမျှ မကြားဘူးပါ။ မည်သည့် သမိုင်းစာအုပ်တွင်မျှ မပါဘူးပါ။ ကိုလိုနီခေတ်က ရေးသားထားခဲ့ သော စာအုပ်စာတမ်း၊ ဂေဇက်တီးယားများတွ င်လည်း မတွေ့ ရပါ။ မောရစ်ကောလစ် အစရှိသော ရခိုင်အကြောင်း စာအုပ်များစွာရေးသားခဲ့ သော၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ၏ စာအုပ်စာတမ်းများတွင်လည်း၊၎င်း နာမည်နှင့်ဆင်တူယိုးမှားသော်မျှ မပါပါ။ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရခါစ က ရောင်စုံသူပုန်တို့ ပေါ်ပေါက်လာရာတွင် ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကို မြန်မာပြည်မှခွဲထုတ်ပြီး၊ မူဆလင်နိုင်ငံလုပ်လို သောအစွန်းေ ရာက်မူဆလင်များ၏ မူဂျာဟစ်ဆိုသောသူပုန်အဖွဲ့ တဖွဲ့ လည်း ပါခဲ့ ပါသည်။ အတိအကျပြောရလျှင် ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးမရမီအချိန်ကလေးအတွင်း ၁၉၄၇ မှာ မူဂျာဟစ် သူပုန် (၎င်းအချိန်က ဗမာအခေါ် ကုလားဆိုး) ပေါ်လာပါသည်။ ၎င်းပုန်များကို အင်္ဂလိပ်တပ်မှူး ရော်ဂျာ ကမ်ပက်ညှက် (Lt. Colonel Roger Campagnag) ဦးစီးသော ဗမာစစ်တပ်ကတိုက်ခဲ့ရသည်။ NLD နာယကကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟောင်း ဦးတင်ဦးသည် ထိုအချိန်က ဗိုလ်သင်တန်းဆင်းစ၊ ကော်မရှင်ရစသာဖြစ်သည်။ NLD နာယကဟောင်းဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကြီး ဟောင်း ဦးကြည်မောင်သည် ဗိုလ်မှူးရာထူးနှင့် အင်္ဂလိပ်တပ်မှူး ရော်ဂျာ ကမ်ပက်ညှက် (Lt. Colonel Roger Campagnag) ၏အောက် ဒုတပ်ရင်းမှူးဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ရေးရရန်ရက်ပိုင်းခန့် အလိုတွင် အင်္ဂလိပ်တပ်မှူးများကို မြန်မာတပ်မှူးများဖြင့် အစားထိုးရာတွင် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဟောင်း ကျော်ဇောက ဒုဗိုလ်မှူးကြီးရာထူးဖြင့်တပ်မှူးဖြစ်လာသည်။ (အသေးစိတ်ကို ဗိုလ်မှူးချုပ် ဟောင်း ကျော်ဇော၏သမီးကြီး ဒေါက်တာလှကျော်ဇောက ကျွန်တော့် ထက်ပိုသိမည်ထင်ပါသည်။)
၎င်းမူဂျာဟစ် အများစုမှာ အရှေ့ဘဂ င်္လားနယ်မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ခိုးဝင်လာသူ တယူသန်မူဆလင်များဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့ ကို ကာဆင်ဆိုသူက ခေါင်းဆောင်ပါသည်။ အရှေ့ ပါကစ္စတန်က ၎င်းတို့ ကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ကူညီပါသည်။ ဥပမာပြရလျှင် မြန်မာဘက်ကတိုက်လိုက်လျှင် နယ်စပ်ကျော်ပြီး ထွက်ပြေးသဖြင့် ဖမ်း၍မရ။ ပါကစ္စတန်အစိုးရကို ဖမ်းပေးရန်ပြောလည်း ဖမ်းမပေး။ နောက်ဆုံး မူဂျာဟစ်သူပုန်ခေါင်းဆောင် ကာဆင်သည် ကော့ဘဇားခေါ် ဖလောင်းချိတ်မြို့မှာ ရှိနေသည်ကို ဗမာအစိုးရက ဓာတ်ပုံအထောက်အထား အခိုင်အလုံနှင့် တင်ပြပြီး တောင်းဆိုသော်လည်း ပါကစ္စတန်အစိုးရက ကာဆင်ကို သူတို့အကျယ်ချုပ် ချထားပါသည်ဟုသာ အကြောင်းပြန်ခဲ့ပါသည်။ တချိန်တည်း၌ အရှေ့ပါကစ္စတန်က တရားမ၀င်ခိုးဝင်သူတွေသည်လည်း ရခိုင်တိုင်းတွင်းသို့ နည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ရောက်ရှိလာပါသည်။ ၎င်းမူဂျာဟစ်တို့ မှာ ဗမာတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလက်နက်ကိုင်တပ်ပေါင်းစု တို့ ၏တိုက်စစ်ကို မခံနိုင်တော့ဘဲ ၁၉၅၂ ခုနှစ်မှစပြီး တဖွဲ့ ပြီးတဖွဲ့ လက်နက်ချခဲ့ ကြရာ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံး ကျန်ရစ်ခဲ့ သော မူဂျာဟစ် ( ၎င်းအ ချိန်က ဗမာအခေါ် ကုလားဆိုး) များလက်နက်ချရပြီး၊ မူဂျာဟစ်သူပုန်ချုပ်ငြီမ်းသွား ပါသည်။ သို့ သော် ၎င်းတို့ က ခေါတောကုလား၊ ဘင်္ဂလီကုလား၊ စသောအခေါ်အဝေါ် တို့ ကို မကြိုက်၍ “ရိုဟင်ဂျာ”ဟူသောအမည်သစ်ကို မိမိတို့ ဘာသာမိမိတို့ကင်ပွန်းတပ်ကြပါသည်။ သို့ ရာတွင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားစာရင်းမထည့်မဖြစ် ထည့် ရလေရန် “ကုလားဖန်ထိုး” ထားသော ဇာတ်လမ်းအချို့ ရှိနေပါသည်။ အများသိစေရန် ၎င်းသမိုင်းလိမ်များကို ဖေါ်ပြပါမည် ။
ပါးစပ်ရာဇဝင်လုပ်ထားသောဇာတ်လမ်း အချို့ မှာ
၎င်းတို့သည် ရှစ်ရာစုတွင်းက သင်္ဘောပျက်ရာမှ ရောက်ရှိလာသော အာရပ်လူမျိုးများဖြစ်သည်။ ရခိုင်ဘုရင်ထံတွင် အမှုထမ်းရာ၌ အလွန်ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့် စုံ သဖြင့်၊ ရခိုင်များက၎င်းတို့ ကို ရွာဟောင်းက ကျား ဟုခေါ်သည်။ ရ ခိုင်သံဖြင့် (Rwahaung Ga Kyar) ကလာသည်ဟူ၏။ လုံးဝ ယုတ္တိမရှိပါချေ။ အတင်းမြန်မာမှု ပြုထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနှင့် ရခိုင်စကားပုံတို့ တွင် ” သေချင်တဲ့ကျားတောပြောင်းတယ်” ဟူ၍သာရှိပါသည်။ ရွာဟောင်းက ကျား ရွာသစ်လာလျှင်သေဖို့ ဘဲရှိပါလိ မ့်မည်။
ဘင်္ဂလားနယ်၌ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၇၅ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် “ပါလာ” မင်းများက “ပါလာအင်ပါရာ” ကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ ၁၂ ရာစုတွင် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် “ပါလာမင်းဆက်များ” ကို ဟိန္ဒူဘာသာဝင် “သေနမင်းဆက်” က ဖြုတ်ချပြီး ဟိန္ဒူအင်ပါရာကို ထူထောင်သည်။ မူဆလင်များသည် ဟိန္ဒူ သေနမင်းဆက်ကိုဖြုတ်ချပြီး မူဆလင်နိုင်ငံထူထောင်သူများဖြစ် ၍ ဘင်္ဂလားဒေသ တခုလုံးကို မူဆလင်တို့သိမ်းပိုက်ချိန်မှာ ၁၄ ရာစု အကုန်ပိုင်းမှသာဖြစ်ပါသည်။
၈ ရာစု ၉ ရာစုက ယခုခေတ် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မူဆလင်ဦးရေအများဆုံးရှိသော အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ပင် မူဆလင်များမရောက်သေးပါ။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ထိုအချိန်က သီရိဝိဇယနိုင်ငံတော်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဒဘာသာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ခဲ့ပါသ ည်။ ခရစ် သက္ကရာဇ် ၈၂၅ ကတည်ထားခဲ့သည့် “များလှစေတီ” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော Borobudur စေတီကြီးသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဒဘာသာစေတီကြီးဖြစ်ပြီး ယခုခေတ်အထိတည်ရှိနေပါသေးသည်။
အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ရခိုင်ပြည်တွ ကိုလိုနီအရာရှိကြီး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် စာရေးဆရာကြီး မောရစ်ကောလစ်ကလည်း “ဘင်္ဂလားနယ်ကို အစ္စလမ်ဘာသာ ၁၂ဝ၃ ခုနှစ်က စတင်ရောက်ရှိခဲ့သော်လည်း (မြန်မာပြည်ပါဝင်သည့်) အင်ဒိုချိုင်းနားကျွန်းဆွယ်မှာကား ၁၄၃ဝ ခုနှစ်အထိ မူဆလင်ဘာသာ အငွေ့အသက်များလုံးဝမရှိခဲ့ပါ” လို့ အတိအလင်းရေးထားခဲ့ပါသည်။
ယင်းအချက်များကိုထောက်ရှုလျှင် “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုသူများ၏သမိုင်းလိမ်လုပ်ဇာတ်၌ ပါသော ၈ ရာစု ၉ ရာစုနှစ်များက သင်္ဘောပျက်ဇာတ်လမ်းများနှင့်ထိုအ ချိန်ကတည်းက ရခိုင်ပြည်၌ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များရောက်ရှိေ နသည်ဆိုသောဇာတ်လမ်းသည် ယုတ္တိမရှိကြောင်း ထင်ရှားပါ၏။ ထိုေ့ကြာင့် ရိုဟင်ဂျာဝါဒဖြန့်ချိရေးသမားများ သမိုင်းလိမ်ပြီးရေးခဲ့သော ၈ ရာစု ၉ ရာစုက ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း၌ အာရပ်သင်္ဘော ပျက်ခဲ့သည်ဆိုသည့်ဇာတ်လမ်းကို ပုံပြင်ဟုသာ သဘောထားကြစေလိုပါသည်။
တခါကမဂိုအင်ပါရာမှ ပသီမင်းသားတပါးသည် စစ်ရှုံး၍ နောက်လိုက်နောက်ပါများနှင့်အတူ ရခိုင်ပြည်သို့ ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြ ပြီး၊ ရခိုင်ဘုရင်ထံတွင် ခိုလှုံနေခဲ့ကြရသည်ဟူသတတ်။ ၎င်းမင်းသား၏အမည်မှာ မိုဟာမက်ရာဟင်ဖြစ်သဖြင့် ၎င်းတို့ မှဆင်းသက်လာသူများကို “ရာဟင်ကျ” ၊ ၎င်းမှကာလရွေလျောလာသောကြောင့် ရိုဟင်ဂျာဖြစ်လာသည် ဟူသတည်း။
၎င်းဇာတ်လမ်းမှာလည်း သမိုင်းကြောင်းနှင့်မကိုက်ညီပါ။ “လံကြုပ်” ဇာတ်လမ်းသာဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရသော်ကား၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၆၆၁ ခုနှစ်တွင် မဂိုအင်ပါယာ၌ နန်းလုပွဲဖြစ်ပွါးရာ ညီတော် သြရန်ဇစ် အနိုင်ရပြီး နောင်တော်ဘင်္ဂလားစား ရှာရူဂျာ ရှုံးနိမ့် ကာ ရခိုင်ပြည်၌လာရောက်ခိုလှုံ ရသည်။ အစတွင် ရခိုင်ဘုရင် မြောက်ဦးရွှေနန်းရှ င် စန္ဒ္ဒသုဓမ္မ က ကြည်ဖြူစွာလက်ခံထားပါသည်။ သို့ သော်နောက်၎ နှစ်ခန့် အကြာတွင် ရခိုင်ဘုရင်က မဂိုမင်းသား၏သမီးတော်တပါးဖြစ်သောအမီနာ ကို တော်ကောက်ရန်တောင်းဆိုရာတွင် ရှာရူဂျာက မချေမငံငြင်းဆန်လိုက်သဖြင့် မဂိုအားလုံးမှာ အကျယ်ချုပ်ချထားခြင်းခံရသည်။ ထိုအခါ မဂိုတို့ သည် ရခိုင်ဘုရင်၏ ကြေးစားစစ်သားများ ဖြစ်သော ကမန်များကို မူဆလင်ခြင်းဖြစ်၍စည်းရုံးပြီး၊ မြောက်ဦးနန်းတော်ကို မီးတိုက်ခါ ပုန်ကန်ရန်ကြံသဖြင့်၊ မဂိုအားလုံးမှာ သုတ်သင်သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရလေတော့သည်။ ကမန်များသည်လည်း တောင်ဘက် ရမ်းဗြဲကျွန်းနှင့် သံတွဲ ခရိုင်တို့ ဘက်သို့ ထွက်ပြေးရလေ တော့သည်။ ၎င်း ရန်မီးပွါးကြောင့် ရခိုင်ဘုရင်မှာ မဂိုအင်ပါယာနှင့်စစ်ဖြစ်ရပြီး ၁၆၆၆ ခုနှစ်တွင် စစ်တကောင်းနယ်ကို လက်လွှတ်လိုက်ရလေတော့သည်။ ထိုအခါမှစ၍ စစ်တကောင်းနယ်မှာ မဂိုအင်ပါယာပို င်နယ်ဖြစ်သွားပြီး ရခိုင်ပြည် မှာလည်း တဖြေးဖြေး အင်အားဆုတ်ယုတ်လာလေတော့သည်။ ဤသည်ကား ရခိုင်မင်းဆက်ပျက်သုဉ်းခြင်း၏အစ ပင်တည်း။
၎င်းသမိုင်းကြောင်းပါကိစ္စကို စာပေနိုဘယ်ဆုရ ကမ္ဘာကျော်ဘင်္ဂလီစာဆိုတော်ကြီး ရာဘင်ဒရာနတ်တဂိုး က ပြုပြင်ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီး “ရခိုင်မိဘုရား” အမည်ဖြင့် ဝတ္တုရေးခဲ့ ဘူးပါသည်။ ၎င်းဝတ္တုကို အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ ဂျော့ ကယ်ဒါရွ န် (George Calderon) က ပြဇာတ်အဖြစ် တင်ဆက်ဘူးပါသည်။ သံတွဲသားစာရေးဆရာ တက္ကသိုလ်နန္ဒမိတ် ( ခေါ်) ဦးတင်အောင်ကလည်း ၎င်းပြဇာတ်ကို မြန်မာဘာသာပြန်ပြီး တဂိုး၏ဇာတ်လမ်းမှာ သမိုင်းပါအချ က်အလက်များနှင့်မကိုက်ညီကြောင်း ၊ အသတ်ခံရသည့် အလွမ်းဇာတ်သိမ်း ခန်းမဟုတ်ဘဲ မင်းသားနှင့်မင်းသမီး နှစ်ဦး ညားကြလေသတည်း ဖြင့်သာဇာတ်သိမ်းထားကြောင်းကို ဘာသာပြန်သူ ဦးတင်အောင်ကထောက်ပြထားပါသည်။ အကျယ်ကို ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁၁၉ ။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်မေလထုတ်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်နန္ဒမိတ်က ရခိုင်ဘုရင်၏အမည်ကို ငကုသ ဟုဖေါ်ပြထားပါသည်။ အမှန်မှာစန္ဒ္ဒ္ဒ သုဓမ္မဖြစ်ပါသည်။ ငကုသနန်းစံနှစ်နှင့် ပသီမင်းသားရောက်သည့် နှစ် မကိုက်ညီပါ။ စန္ဒ္ဒ္ဒ္ဒသုဓမ္မနန်းစံနှ စ်နှင့်သာ ကိုက်ညီပါသည်။ ငကုသမှာ ရခိုင်ရာဇဝင်ကျမ်းတိုင်း၌ မင်းဆိုးမင်းညစ်အဖြစ်ဖေါ်ပြလေ့ ရှိသ ဖြင့် တက္ကသိုလ်နန္ဒမိတ် မှားယွင်းသွားဟန်ရှိပါသည်။ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ ၎င်းဇာတ်လမ်းမှာလည်း ရိုဟင်ဂျာထိုးဇာတ်နှင့် မည်သို့ မျှ မသက်ဆိုင်နိုင်ပါ။
ပထမ အချက်မှာ မင်းသား၏အမည်မှာ “ရှာရူဂျာ” ဖြစ်ပြီး၊ “ရာဟင်” မဟုတ်ကြောင်း သမိုင်းတွင် အတိအလင်းပါပါသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ မဂိုအားလုံးသည် ရခိုင်ဘုရင်၏သုတ်သင်ခြင်းကို ခံလိုက်ရသဖြင့် မျိုးဆက်မကျန်နိုင် တော့ပါ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဆက်အနွယ်တချို့ ကျန်နေခဲ့ ပါလျှင်လည်း မဂို ရုပ်နှင့် အသားဖြူသူများသာ ဖြစ်ရပါမည်။ ယခုကဲ့ သို့ စစ်တကောင်းသားရုပ်နှင့်ဘင်္ဂလီ စစ်တကောင်းစကား ပြောနေသူများတော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ ကြောင့်ဒုတိယဇာတ်လမ်းမှာ သမိုင်းကြောင်းမှ အတင်းဆွဲယူထားသည့် လုပ်ဇာတ် ဆိုပါက မှားမည်မထင်ပါ။
ပထမဇာတ်လမ်းကဲ့ သို့ ပင် ရှစ်ရာစုတွင်းက အာရပ်သင်္ဘောပျက်ဇာတ်လ မ်းဖြစ်သည်။ ရိုဝန်ညှာ (Rowennya) ဆိုသော စကားမှဆင်းသက်လာသည်ဟု၏။ ပထမဇာတ်လမ်းကဲ့ သို့ ပင်ယူဆရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အခြေအမြစ်အထောက်အထားမရှိပါ။ ကြ ည့် မြင်တိုင်ကို (Come and dine) ) ၊ ပုဇွန်ထောင်ကို (Push him down ) တို့ မှ ဆင်းသက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဆိုသော “မဟာပျင်ငြာယှိဂျီး” ၏အတွေးအခေါ်မျိုးသာဖြစ်ပါ သည်။ ၎င်းတို့ ၏ အာရပ်သင်္ဘောပျက်ဇာတ်လမ်းမျိုးမှာ” သင်္ဘောသား ဆင်းဘတ်” (Sindbad the Sailor) ၏ သင်္ဘောပျက်ဇာတ်လမ်းများထဲတွင် ပါတတ်သော ဇာတ်လမ်းတခု နှင့်ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေပါ၏။
“တထောင့်တညပသီပုံပြင်”ဆိုသည်ကို မြန်မာများကြားဘူးကြပါလိမ့် မည် ။ ဆရာကြီးသခင်ဘသောင်းကမြန်မာဘာသြာ ပန်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာကြီးသခင်ဘသောင်းသာအသက်ရှင်ေ နသေးပါလျှင် “ဆရာကြီးခင်ဗျား၊ ၎င်းတို့ ၏ “ရိုဟင်ဂျာပုံပြင်များ”ကိုလည်း တတောင့်တညတွင် ထပ်တိုး၍ “တထောင်နှစ်ည ပသီပုံပြင်” စာအုပ်သစ်ထုတ်ပါ” ဟုသာပြောချင်ပါဘိတော့သည်။
မြောက်ဦး ခေတ်ရခိုင်ပြည်၏ သြဇာခံ မူဆလင်နိုင်ငံတခုရှိခဲ့ သည်။ ၎င်းပြည်ကို ရုံပြည် ရခိုင်သံဖြင့် (Roang) ခေါ်သည်။ ထိုနိုင်ငံမှမင်းသားတပါးနှင့်နောက်လိုက်နောက်ပါများရခိုင်ပြည် တွင်လာရောက်ခစားနေထိုင်သည်။ ၎င်းတို့ ကို “ရုံအင်ကျ” ဟုခေါ်ခဲ့ရာမှ ကာလရွေ့ လျော၍ “ရိုဟင်ဂျာ” ဖြစ်လာသည်ဟူ၏။
မဟာပညာကျော်လျောက်ထုံး ၊ ဓညဝတီ အရေးတော်ပုံ စသော ရခိုင်ရာဇဝင်ကျမ်းများတွင် ရုံပသီပြည်မှ ရုံမင်းသည် ရခိုင်ဘုရင်မင်းဖလောင်းကြီးနှင့် အမတ်ကြီး မဟာပညာကျော်တို့ ကို လေးစားကြည် ညိုလှ၍ သားတော်အလတ် ရှာအလင် နှင့်နောက်ပါ တထောင်တို့ ကို မြောက်ဦးမြို့ တော်သို့ စေလွှတ်ပြီး “မရာမာ” (မြန်မာ) ဘာသာစကား စာပေ ယဉ်ကျေးမှု တို့ ကို လေ့ လာသင်ယူစေကြောင်း၊ ပါရှိပါသည်။ သို့ ရာတွင် ၎င်းတို့ အုပ်စု ရခိုင်ပြည်တွင် အခြေချနေထိုင် ကြောင်းတော့မပါပါ ။
ထို့ ကြောင့် စတုတ္ထဇာတ်လမ်းကို သမိုင်းနှင့်ညီမညီ စီစစ်ကြပါစို့ ။ ရုံမင်းသား “ရှာအလင်” နှင့်နောက်လိုက်နောက်ပါတို့ မှာ မရာမာ (မြန်မာ) စာပေ၊ စကား၊ ယဉ်ကျေးမှု တို့ ကို မင်းဖလောင်းကြီးခေတ်မှပင် သင်ယူခဲ့ ပြီးဖြစ်ရကား၊ နောက်နှ စ်ပေါင်း ၄၀၀ ခန့် ကြာနေသည် ဖြစ်သည့်ယခုခေတ်တွင် ၎င်းတို့ ၏အဆက်အနွယ်များမှာ မြန်မာစကားနှင့်ရခိုင်စကားတို့ကို ကောင်းစွာတတ်ရပါမည်။ ရွှေဘို ခရိုင်မှ မြန်မာမူဆလင်များနှင့် ဗရင်ဂျီ အဆက်အနွယ်များက သက်သေခံပါလိမ့် မည်။ ဥပမာ။ ကွယ်လွန်သူရေတပ်ဗိုလ်မှူးဟောင်း ဘသော် (စာရေးဆရာမောင်သော်က) နှင့်၎င်း၏ညီဝမ်းကွဲ ကွယ်လွန်သူ ကျားဘညီမ်း ( မန္တလေးမြို့ ရွှေ ကျားလက်ဝှေ့ အဖွဲ့ ကို တည်ထောင်သူ) တို့ မှာ ရွှေဘိုသားမြန်မာမူဆလင် အစစ်ကြီးများဖြစ်ကြပါသည်။ သူတို့ ဆွေမျိုးတသိုက်လုံး မြန်မာဗုဒ္ဒဘာသာဓလေ့ ထုံးစံများကို မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်အချို့ ထက်ပင် ပို၍သိကြပါသေးသည်။ ထို့ ကြောင့်သူတို့ ညီအကိုများကို အချို့ ဗမာများက “ကမ္မာဝါညှပ်မည့် မူဆလင်များ” ဟု ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့ ကြရပါသည်။ ယခု ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများကို ကြည့် ပါ။ မုတ်ဆိတ်မွှေးက တတောင်လောက် ၊ မိန်းမ များကို ကြည့် လျှင်လည်း ခေါင်းမီးခြုံ ၊ပြောသည့် စကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ကလည်း ဘင်္ဂလီစစ်တကောင်းစကား ကလွဲပြီး ဗမာစကား ၊ ရခိုင်စကားတလုံးမျှ မတတ်ကြပါ။ မည်ကဲ့ သို့ ရခိုင်ပြည်တွင်း၌ အ နှစ် ၄၀၀ ခန့် နေထားခဲ့ သူများဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်း။ ထို့ ကြောင့် စတုတ္ထဇာတ်လမ်းမှာလည်း လုံးဝ ယုတ္တိမရှိပါ။
ဝါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး ကြေးမုံဦးသောင်း (စာရေးဆရာအောင်ဗလ) ၏အဆိုအရ “ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုသောအမည်ကို အလံနီကွန်မြူနစ်များက မူဂျာဟစ် သူပုန်များအတွက် ထွင်ပေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၁ ၉၄၀ခုနှစ်များအကုန်ပိုင်းနှင့် ၁၉၅၀ ခုနှစ်များအစပိုင်း တွင် အလံနီများနှင့်မူဂျာဟစ်များမှာ မဟာမိတ်ဖွဲ့ ထားပြီး ဖဆပလ အစိုးရကိုတိုက်ခိုက်နေကြကြောင်း ၊ မူဂျာဟစ်များက သူတို့ အတွက်ရခိုင်သမိုင်းဝင်နံ မည်တခု ရှာပေးခိုင်းသဖြင့် အလံနီများက “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုသောအမည်ကို ရှာပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မည် သို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်ကိုတော့ ဦးသောင်းကိုယ်တိုင်လည်းမသိကြော င်း၊ မည်သူကမှလည်း အဓိပ္ပါယ်ကို မသိကြောင်းပြောပြပြီးလျှင်ဦးသောင်းက စာရေးသူအား ဆက်၍ပြောသည်မှာသူကိုယ်တိုင် ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဆန့် ကျင်သူဖြစ်နေသော်လည်း ဤ “ရိုဟင်ဂျာ” ကိစ္စကဲ့ သို့ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ နှင့်တိုင်းပြည် နစ်နာမည့် ပွဲလန့် တုန်း ဖျာခင်းသည့် ကိစ္စမျိုးတွင် တော့ လုံးဝ မထောက်ခံနိုင်ကြောင်း ၊ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ပေါင်းချင်းပေါင်းလျှင်စစ်အစိုးရနှင့်ပေါင်းပြီးတိုင်းပြည်ဖျက်မည့် ”ရိုဟင်ဂျာ” ကို တိုက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉၉၃ ခု မေလ က ဘာလင်မြို့တွင် ကွန်ဖရင့်လာတက်စဉ်က ပြတ်ပြတ်သား သားပြောသွားခဲ့ ပါသည်။
“ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုသောအမည်ကို အလံနီများက ထွင်ပေးခဲ့ သည် ဆိုသော ဦးသောင်း၏အဆိုအမိန့် မှာ အလွန်ယုတ္တိရှိပါသည်။ အလံနီများသည် အမည်သစ်ထွင်ရာတွင်ပါရဂူမြောက်သကဲ့ သို့၊ “နာမည်ပြောင်”ပေးရာတွင်လည်း ကော င်း၊ အနွတ္တသညာ သမုတ်ရာတွင်လည်း အတုလံသူများဖြစ်၍ သူတပါးအားနံမည်ဖျက်ရာကိစ္စများတွင်တော့ သူမတူ ထူးချွန်သူများဖြစ်ကြပါ၏။ ၎င်းကိစ္စအားလုံးတွင် အလံနီများသည် မည်သူမျှမယှဉ်သာသော “စပယ်ရှယ်လစ်” များဖြစ်ကြပါသည်။ ဥပမာ နှစ်ခုပေးပါမည်။
ပထမတခုမှာ ဦးနုအစိုးရကို “မသာတခုအရင်းပြုတဲ့ ငနုအစိုးရ” ဟုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အာဇာ နည်ကြီးများ၏အသုဘကို အမြတ်ထုတ်ပြီး မဲနိုင်သွားသည်ဟု အကျိုးယုတ်အရှက်ကွဲ သိက္ခာချခဲ့ သူများဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယတခုမှာ ၎င်းတို့ ၃ ပါတီမဟာမိတ်များ သိမ်းပိုက်ထားသော လွတ်မြောက်သည့် နယ်မြေ ဆိုသည့် နေရာများတွင် ကျောင်းသုံးဒေါင်းတံဆိပ် မြန်မာဖတ်စာ သင်ပုန်းကြီးပါ “ဘူးသီးနုနုမခူးရ ၊ ငါ၏ဒူးနာ၏” စသောဖတ်စာများအစား ၎င်းတို့ထွင်ထားသော “ဖဆပလ ၊ လခ မရ၊ မဝတဝ စားရ ၊ ခဏ ခဏ အာဏာပြ ၊ စသော နိုင်ငံရေးသင်ပုန်းကြီးများကို သင်စေခဲ့ သူများ ဖြစ်ပါသည်။ အလံနီခေါင်းဆောင်ကြီးသခင်စိုးသည် နံမည်သစ်များထွင်တတ်သူ ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ “”အနုပဋိလောမရုပ်ဝါဒ” စသော ပါဠိဘာသာအရ သဒ္ဒါမမှန်သည့် ဝေါဟာရသစ်များကို အလွန်ကြိုက်သူလည်းဖြစ်ပါ၏။ ရခိုင်တိုင်းအလံနီခေါင်းဆောင်ကျော်ဇံရွှီး မှာ ရခိုင်တဦးဖြစ်သဖြင့် သူတို့နှ စ်ဦးသည်၁။ “ရုံပသီပြည်” (Sultanate of Roang) အကြောင်း ကြားဖူးနားဝဖြင့် ရုံပြည်သားများ (Roangian) ဟူသော အမည်ကို ရှာဖွေပေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်တန်ရာပါသ ည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း ကြံဖန်အကြောင်းပြရမည့် မူဂျာဟစ် များကလည်း ၎င်း အမည်သစ်ကို ခဏမဆိုင်းဝမ်းသာအားရလက်ခံလိုက်ြ ကဟန်ရှိပါသည်။ (Roangian ) ကို (Ro-an-gian) ဟုအသံထွက်ရာမှ အသံထွက်မမှန်သဖြင့် ဘင်္ဂလီသံဖြင့် “ရိုဟင်ဂျာ” ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိပါသည်။
၂။ ဒုတိယဖြစ်နိင်ချေမှာ ဘင်္ဂလီစကားဖြင့် ရခိုင်ပြည်ကို ရိုဟန်(Rohan) ဟုခေါ်ကြောင်း ၊ လူမျိုးကို ဂျာ (Gya) ဟုခေါ်ကြောင်း၊ ရခိုင်သား သို့ မဟုတ် ရခိုင်လူမျိုးကို ရိုဟင်ဂျာ (Rohangya) ဟုခေါ်ကြောင်း၊ သခင်စိုးနှင့်အလံနီများသိသွားသြ ဖင့်၊ ရခိုင်သားဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည့် ၎င်းရိုဟင်ဂျာဆိုသောအခေါ်ကို ထွင်ပေးလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၃။ တတိယဖြစ်နိင်ချေမှာ သခင်စိုး သည်စာအလွန်ဖတ်သူဖြစ်ရာ စကော့လူမျိုး အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ဆရာဝန် ဘူခါနန် (Buchanan) ရေးခဲ့ သော ရိုအင်ဂါ (Rooinga ) ဆိုသောစကားလုံးကို လည်းဖတ်မိပြီး ၎င်းစကားလုံးမှ “ရိုဟင်ဂျာ” ထွင်ပေးကြောင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
နောက်ပိုင်းဝင်ရောက်လာသော စစ်တကောင်းသားများ နှင့်၎င်းတို့ ကို အားပေးနေသောသတင်းစာဆရာ၊ သမိုင်းဆရာ ဆိုသူအများစုမှာ “ဝ မရှိဘဲ ဝိလုပ်ချင်သူများ” ဖြစ်၍ ထင်ရာကိုစွတ်ပြောပြီး “ယုတ်တန်း” ရမ်းတုတ်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်းကြောင်းကို အသေအချာလေ့ လာကြဟန်မတူပါ။ နောက် ထပ်ဝင်လာသမျှ စစ်တကောင်းသားအပေါင်းတို့ ကလည်း ၊ အများ “ဂျာ” သဖြင့် လိုက်”ဂျာ”ကြ ပြီး “ရိုဟင်ဂျာ ” ဖြစ်သွားကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မိမိကိုယ်ကို မိမိ “ဘားမာအိပ်စပတ်” လုပ်ထားသော သတင်းစာဆရာ မာတင်စမစ် (Martin Smith) က ၎င်း၏ ဆောင်းပါးများတွင် လက်ရှိမြန်မာပြည်စစ်အစိုးရသည် ရခိုင်ပြည်ရှိ ရှေးဟောင်းမူဆလင် အမည်များကို ဗမာမှု အဖြစ် ဗုဒ္ဒဘာသာအမည်သစ်ပြောင်းပြ စ်နေသည်။ ဥပမာ။ အာရကန် (Arakan) မှ ရခိုင် (Rakhine)သို့ ပြောင်းသည်။ အက်ကြက် (Akyab) မှ စစ်တွေ (Sittwe) သို့ ပြောင်းသည်။ စသဖြင့် ရေးထားပါသည်။ အကျယ်ရှင်းပြရန်လို အပ်မည်မထင်ပါ။ ထင်ရာလျှောက်ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်ကို စာရှုသူအားလုံးတို့ သိကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကဲ့ သို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဟုတ်သော” ပုပ် ကိုယ်ကြီး” များ၏လက်ချက်များမှာ အလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါသည်။ သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ကို မတရားအသုံးချခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ ၏လက်ချက်ကြောင့်ပင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရော မြန်မာသမိုင်း နှင့်ကမ္ဘာ့သမို င်းတွင်ပါ တခါမျှ မပါခဲ့ဘူး၊ မရှိခဲ့ ဘူးသော “ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုသောနံမည်သည်ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်သွားပြီး ၊ ထိုစစ်တကောင်းသားများကို မြန်မာနိုင်ငံသားပေးရမည်ဆိုပြီး ကုလသမဂ္ဂ နှင့် အိုအိုင်စီ (OIC) တို့ က မြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်အပေါ် ကိုဖိအားပေးခဲ့ကြရာမှ ယခုဒေါ်စု အင်အယ်လ်ဒီ (NLD) အစိုးရလက်ထက်တွင် ကုလသမဂ္ဂ နှင့် အိုအိုင်စီ (OIC) တို့ ၏ အနိင်ကျင့်ဗိုလ်ကျချက် များမှာ အဆိုးဆုံးသို့ ရောက်လာပါသည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကပင် စာရေးသူရော ဗုံပေါက်သာကျော်ပါ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကြီးဆုံးအန္တရယ်သည် ရိုဟင်ဂျာပြဿနာဖြစ်ပါလိမ့် မည် ဟုကြိုတင် သတိပေးထားခဲ့ သည်များမှာ ယခု ၂၄ နှစ်အကြာတွင် အတိအကျမှန်နေသည်ကို မြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်း လက်တွေ့ မြင်နေရပြီ ဖြစ်ပါသည်။
“သတင်းစာဆရာ”၊ “လူ့ အခွင့်အရေးသမား”၊ “လူနည်းစုများကို ကာကွယ်သူ” ဆိုသော “ပုပ်ကိုယ်ကြီး” များ၏လက်ချက်များမှာ အလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါသည်။ လွတ်လပ်စွာရေးသားပြောဆိုခွင့်ကို မတရားအသုံးချ ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ သည်တနေ့ နေ့ တွင်” မြန်မာစစ်အစိုးရသည် သမိုင်းဝင်အမည် (Rangoon ) မှ ရန်ကုန် (Yangon) သို့ ပြောင်းပစ်သည်။ (Rangoon) ဆိုသည် မှာ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် မြောက်ပိုင်းရှိ (Rangunia) ရန်ဂွန်းနီးယား နယ်သားဘင်္ဂလီများက တည်ထောင်ခဲ့ သောမြို့ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ ဒေသရင်းကို စွဲ၍ ပေးခဲ့သောအမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရက အတင်းမြန်မာမှု ပြုပြီး ရန်ကုန်ဟုပြောင်းပစ်သည်။ သက်သေခံအထောက်အထားအဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ကို ဂျာမန်ဘာသာဖြင့် Rangun ဟုရေးခဲ့သည်ကိုကြည့်ပါ” စသော “လံကြုပ်” ဇာတ်လမ်းများကို လည်း တည်ထွင်ကောင်း တည်ထွင်ကြပါလိမ့် ဦးမည်။ စောင့်သာကြည့် ကြပါတော့ အရပ်ကတို့ ဟုသာဟစ်လိုက်ချင်ပါဘိတော့သည်။
၁၉၇၀ ခုနှစ်များအတွင်းက ခေတ်စားခဲ့ေ သာ သီချင်းတပုဒ်ကို သတိရလာမိပါသည်။ သီဆိုသူအမျိုးသမီး၏အမည်နှင့်တေး သားအားလုံးကို မမှတ်မိတော့ပါ။ မှတ်မိသောစာသားအချို့ မှာ “ပွဲလန့် တုန်းဖျာခင်းမလို့ကြံရွယ်၊ နောက်မှရောက်လာတဲ့ ကိုယ်လူလည်၊ သူ ကျမကို ချစ်တယ်၊မေတ္တာနေရာမပေးကွယ်၊ ကျမမှာချစ်သူရှိတယ်၊ ရှင်ငရဲကြီးလိမ့် မယ် ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ ယခုစစ်တကောင်းသားများကိစ္စတွင် ၎င်းတေးသွားအတိုင်း စာသားပြောင်းပြီး “ပွဲ ကို လှန့် ပြီး ဖျာခင်းမလို့ ကြံရွယ်၊ အနောက်ကရောက်လာတဲ့ ခေါ်တောလူလည်၊ သူကိုယ်ကို သူ ရိုဟင်ဂျာတဲ့ ကွယ်၊ ရခိုင်ပြည်မှာ နင်တို့ အတွက် နေရာမရှိတယ်၊ လူများပြည်ကို လုချင်ရင်၊ “ဂျဟာနမ်” ငရဲအိုးမှာ ဇောက်ထိုးကျလိမ့် မယ်” ဟု သီချင်းသစ်ထွင်ပြီး ဆိုရတော့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ။
← မောင်နောင်မွန် ● တောတောင်ခင်တန်းတွေအကြောင်း
နိုင်ဝင်းသီ- Black List တဲ့လား →
စာအုပ်စင် ဖိုးထက် ဝေဖန်ရေးရာ